WATFORD, England - Troy Deeney inotungamirira mutungamiri Watford muFIFA Cup final musi weMugovera pamusoro peManchester City (11h55, ESPN +) kuitira kuti asimudze mukombe kusvika kumahombekombe akazonaka akazotanga nekuiswa mujeri kwemwedzi gumi, mu2012, nekurwisana neboka revadzidzi muguta rake reBirmingham.
Uyu munhu 30 makore, akasunungura pashure pemwedzi mitatu muusungwa mutongo pashure kuratidza kuzvidemba nokuda chiitiko, Kubvira upenyu hwake uye akava mufananidzo hunokosha Watford panguva yake wegomo EFL Championship kuva isingachinji simba Premier League.
With Deeney kugadzirira mukuru machisi rake basa kwevhiki rino, akataura ESPN FC kudiwa kukunda matambudziko oupenyu hwake pachake kuti kuratidza kuti zvaigoneka kuti kubva mumamiriro ezvinhu akaomesesa.
Mark Ogden: Chii chatinonzwa kusvika ikozvino? mukuru weWatford muChikwata cheF FA Cup kuWembley,
Deeney: Uyu ndiwo mumwe wemitambo yavo apo, vachitarisa kumashure ikozvino, zvekare kuti ndiwane madzimambo (Prince William) nezvimwe zvakadaro, ichokwadi mupfungwa paunofunga nezvayo. Isu tiri vakakosha kunze, asi panguva imwechete, ndinozvikudza zvikuru nekubudirira uku.
- Kuenda kujeri kwaiva chikomborero mukunyengedza - Deeney
- Marcotti: iwe unoda kuziva nezveFIFA Cup yekupedzisira
Ogden: Iwe unotaura pamusoro pezvawakamboita uye inhau inofadza yekukunda dambudziko kuti utungamirire boka muFIFA Cup yekupedzisira Titiudze pamusoro payo - wakapedza nguva mujeri mu2012.
Deeney: Ini ndiri mwana chaiwo, achibva kumaguta edzimba. Ndakangoita zvishoma - mwana. Ndaive mwana akafara, mwana chaiye anofara, asi mamiriro ezvinhu akachinja chaizvo. Ndichiri kufara chaizvo, asi ndangova nerumwe rutivi kwandiri, zviri pachena, kuti handidi kubudisa. Kuti ndidzoke ku2012, yakanga iri gore rakaipa kwandiri. Iniwo ndakarasikirwa nababa vangu, saka ndakamuviga kwevhiki ndisati ndaiswa mujeri nokuti ndaigona kungonzwa manzwiro aya ose, zvakandirova zvakaoma.
Pandakauya kujeri, yakanga iri chikomborero pakuvhara nokuti yakandiita kuti ndiongorore uye ndione kuti ini ndiri ani semunhu. Yakavhura nzira itsva ... kufanana nekuona chiremba wepfungwa uye kunyatsogadzirisa matambudziko angu nokuti ndainwa zvizhinji. Ndaiwanzofunga kuti ndakanga ndichitarisira zvinhu, asi ndakanga ndichinwa uye yakava nemagetsi.
Sezvo ndakasunungurwa kubva mujeri, ndakagara ndichiita zvikanganiso zuva rimwe nerimwe, usandinyengedza, ini handiri ngirozi, asi kukanganisa kwangu kwakazara zvakakwana, sekukanganwa kuenda kuchitoro apo bhosi inobvunza kana kuti usakanda mapani emarara, nezvimwewo.
Troy Deeney akatanga basa rake rehutano naWalsall, vasati vasvika paWatford mu2010. Troy Deeney
Ogden: Vamwe vanhu vanoenda kujeri uye izvo hazvina kuchinja, asi iwe wakashandisa nguva yako kuti unyore zvinhu zvaunoda kuita nekuisa pfungwa pane
Deeney: Hongu, uye ndizvo zvandiri kuita iye zvino. Ndinogara ndakanamatira. Ndine matambudziko emwedzi mitatu, ingava mari, kurasikirwa-izvo zvandave ndichiita nguva dzose kuzviisa chinangwa nokuti ndinofunga kuti chinhu chakaipisisa chinogona kuitwa nomunhu ndechekuti aripo uye chaizvoizvo akafanana: "Upenyu hunoenderera mberi," uye vanoramba vachizviita uye usati wazviziva, uri kudzokera kune dzimwe nzira dzako dzekare.
[Mushure mejeri] Ndakatema doro uye mutambo, ndakaputsa nemumwe wangu waimbova naye, ndaiva ne missus itsva iyo inenge isingatsigire hapana -. Anongonditaurira kuti ndiri sei.
Munhu wese akange achitsoropodza ini, ndizvo zvandaida, vanhu vanofanira kundiudza "haakwanisi kuzviita zvakare, iye akwegura iye zvino, unofanira kumubvisa" akafanana ne "Ndiri kuzokuratidza. "Saka, ndine dombo matatu nehafu pasi zvino uye ndine ndebvu nezvose. Nyika yose yachinja.
Ogden: Mushure mokunge vatumirwa kujeri, maiva kutya here kuti musati mutevedzo? Watford aiva newe, asi zvaigona kunge zvakasiyana.
Deeney: Iyo nzvimbo itsva yakatora simba panguva imwe chete. MunaAugust, taive nevatambi ve 42 panguva iyoyo. Vakanga vachangotenga, vakatenga, vakatenga, uye ndaive kubuda munaSeptember, saka pakupera kwaAugust, zvaiita se "ndiani uyu nhamba 9, ari kupi?" "Vaive vachitaurirana nemugovere wangu uye, ndinoonga, [maneja] Gianfranco Zola aifanira kundiziva. Anofanira kunge akafunga kuti, "Ane tarenda, ona zvaari iye paanobuda." Uye panguva ino, ivo [Watford] havana kundibhadhara, saka hazvina kutora chinhu.
Saka ndakabuda musi weChitatu, ndakapinda muchikwata, ndikazvizivisa - ndakanga ndiri pahotera. panguva iyoyo, ndaive nehwindo remaawa anenge matanhatu - ndakataurirana kwenguva pfupi naZola ndokuti, "Ndakaita zvikanganiso, asi ndinoreva bhazinesi zvino. Akati, "Pane hupfumi mberi uye iwe uri nhamba mapfumbamwe," asi ndakafunga kuti, "Zvakanaka, zvinotonhora, asi hazvizoperi kwenguva refu."
Ndaive netariro panguva iyoyo. Ndangobuda kunze kwejeri, vhudzi rangu rakakura kwazvo, ndaivewo mukuru nokuti zvose zvandaikwanisa [mujeri] zvairema uye ndakasundira, saka ndakamuudza kuti azondipa vhiki uye kuti ndimhanyire kwevhiki.
Ndakashandisa kuenda Birmingham, kupinda, kuita zvose - run, ari yokurovedza muviri, kudhayeta, zvose zvapera zvishanu o'clock, simuka wangu kwasviba seven, enda hope Kamwe zvakare, ndizvo zvandaiita uye, mazuva 10 mushure mekunge yakabudiswa, ndakakunda mukundi weHurdersfield.
- United inoda City kuti iwane FA Cup kuti irege kudzivirira mitezo
- Ndiani anotsigira Europe seLigan League?
Ogden: Saka iwe wakaratidza kuchinja kwepfungwa?
Deeney: Kubvira panguva iyoyo zvichienda mberi, zororo rose ndeyezvakaitika, asi kwandiri, unofanira kufunga pamusoro paro, nokuti pane zvipingamupinyi zvakanyanya kumba. Kana, ndaifara zvikuru kuita maererano nekushanda neshamwari dzangu dzose kubva kumba, kunditora mamwe mabhuku, ndaifunga kuti ndini murume, uye ndakanga ndichiri kurarama segomba - zvichida ndiyo nzira yakanakisisa yokutsanangura nayo. Ndaifunga kuti ndakanga ndisingaiti. Zvadaro chinhu chakanakisisa pamusoro pazvo chakanga chiri kutituma ini kutumirwa kujeri uye kunyatsoona kuti ndiani.
Vanenge vatanhatu vakanyorera kwandiri, vanenge vanhu vatanhatu vakanditumira mari, uye ipapo vanhu vaviri bedzi, chaizvoizvo vaviri, vakatarisa Missus nemurume muduku [Myles] panguva iyoyo kuti vaone kuti vakanga vari kuita sei. Handitombodi kusvika kune imwe nzvimbo pandinofanira kuona kuti ndiani. Asi ikozvino ndinoziva kuti ndiani uye ndiani ari chaizvo kwandiri uye ini ndinonyatsoziva izvozvo.
Ogden: Titaurirei nezvemavara ako uye zvirevo zvazvo maererano nezvakaitika kare.
Deeney: My nan akanyora nhetembo pandakanga ndiripo. "Ndakarwa zvakaoma, ndakapedza chikoro, ndakachengeta kutenda." Akanyora izvi kwandiri, nguva pfupi ndisati ndada kuuya, uye ndakaiverenga ndisati ndarara. Ndiwo mumwe wavo, ramba uchienda uye iwe usati wamboziva, iwe wakaita zvikanganiso, asi zvinhu zvinoramba zvichiitika.
Ipapo ndava nababa vangu pano [kurudyi]. Baba vangu vakafa pamakore 47 apfuura, saka zvaizova 2012 zvakare. Ndakaona kuti aiva nekenza pakupera kwaFebruary, pakutanga kweMarch, uye akafa muna May. Yakanga iri nguva yemavhiki masere panguva iyo hukuru hwangu hwakasunungurwa.
Ndine imwe musana wangu, ndiani ari murwi, uyo ari ini chaizvo, ini ndichiedza kuenda kumba ndozorodza. Unoyeuka here bhafirimu "Gladiator" paanofamba? Iko rudzi rwekufuridzira maererano nerokuti hongu, "Ndaneta nekurwa zvino. Ndinongoda kunakidzwa. "
Deeney akarovera mumutambo wechitatu uye semifinal panguva yekuti Watford yakasvika kuFace Cup yokupedzisira kubvira 1984. Getty
Ogden: Pane nzvimbo ye tattoo ye FA Cup kana iwe uchikunda neMugovera?
Deeney: Kana zvakadaro, iyo inofamba munzvimbo yose pano! Hongu, kana tikakunda izvozvo, ndichazviisa pane imwe nzvimbo.
Ogden: Pashure pokukunda pamusoro Mapere ari semifinals, iwe akapa yekutaura umo iwe wakati makanga zvoudyire nokutaura zvazvaireva kwamuri, asi yava sei vakawanda vanhu.
Deeney: Ndinotaura zvakawanda, asi handidi chaizvo kutaura pamusoro pangu. Ndinoda kutaura pamusoro pezvimwe zvose, asi nguva ino inondishungurudza nokuti mushure memutambo, ini ndakanga ndisingadi kuva nemumwe wevarume zvakare. Zvinonzwika zvakashata, asi ndangoda kuona mhuri yangu. Amai vangu havatarisi chaizvo mitambo yangu, mudzimai wangu akanga ari kumusoro uko, vakomana vangu vakanga vari kumusoro uko, uye zvakafanana, iwe unoziva, apo munhu wose aive newe munguva dzenguva dzakaoma?
With Instagram nezvose zvino vose anofunga kuti upenyu hwakakwana, asi pane mazuva kana ndikaenda uye ndiri kwindi kana ndiri kurwara vakadzidziswa, zvisinei nokuti chii angava, I Ndiri mumamiriro ezvinhu akaipa - ndivo ndivo vanofanira kutarisira uye kuona nokuti ini handiri murume akanaka kana ndiri mukutambudzika. Ndinongotaurira vanhu uye ini ndinozvicheka uye, zvechokwadi, zvinokanganisawo zuva ravo, saka ndangoda kuva navo uye tine nguva yakanaka.
Ndakanga ndiri mukufungidzira mafashoni. Pane makore anopfuura 13 apfuura, ndaive ndichiripira kutamba bhora. Iwe unoona, zvichida pane 15, mazinga 18 pasi pePremian League uye ndaive ndichibhadhara £ 10 pavhiki kuti nditambe bhora uye ndive vakomana. Iye zvino ini ndiri mukuru wePremier League team uye FA Cup yekupedzisira. Ichokwadi chaizvo.
Ogden: Uye ikozvino, uri muFIFA Cup yekupedzisira kunopikisana neboka rinenge riri parwendo rwepasi-iwe haungave wakasarudza muvengi ane simba, ndinofungidzira.
Deeney: Aiwa, asi ndizvo zvazvakaitawo Troy! Ndinofanira kuita kuti basa racho rive rakaoma sezvinobvira, asi kwete, ndinofunga kuti tangotaurirana pamusoro pezvichaitika kana tikakunda mutambo. Izvo hazvina zvikonzero ipapo. Hazvina kufanana, oh, iwe wakakunda asi iwe hauna kutamba mumwe wevakomana vakuru kana chero zvakadaro. Iwe unofanirwa kusvika pahuwandu hwemakwikwi uye uite mutungamiri akakurumbira wechizvarwa ichi. Iwe une zvimwe zvevatambi vakanakisisa zvakakupoteredza uye zvino tinoedza kuvadzivisa.
Asi kwandiri, haisi kutya. Tarisa pazvose zvataitaura nezvazvo. Bhora harifaniri kundityisidzira kana kutamba Man City ... nekuda kwezvose zvandakaona.
Ogden: Ko vatendi vako vemauto vane pfungwa imwe chete vasati vapinda mumutambo here?  Deeney: Ndinofunga zvakadaro, zvichibva pahurukuro yatakanga tine nevanhu. Uye mutambo, hausi hupenyu chaihwo, uye nguva yakawanda sei wakapfuura nhoroondo yemitambo, ingava ibhola, bhodhi kana chimwe chinhu, kune marudzi ese ezvinhu izvo zvinoitika uye iwe unoenda, "yakabva kupi? ? "Ndiri kuzonakidzwa nenguva, ndichaenda kunosangana nemhuri yeumambo kwekutanga. Ndine urombo, asi ndinoshamisika zvikuru izvi zvinoitika, kunyange zvazvo [Prince William] ari fan of Villa Ndichamurega aende!
Ogden: Uri kutaura pamusoro peMambo William, ramangwana mambo here?
Deeney: Hongu, ramangwana ramambo, asi ini ndiri blues fan uye ari fan of Villa naizvozvo ndichamurova iye. Munhu wose anonditaurira kusaita, asi ndinofunga kuti ndinofanira kuzviita.
Ogden: Matangi anotangira naW muChikwata cheF FA Cup - Wimbledon akarova Liverpool mu1988, Wigan yakarova Man City mu2013. , Watford ...
Deeney: Hongu, ndinofunga kuti ndiko kwaunofanira kuvimba. Ndichiri kuyeuka apo Ben Watson akawana musoro uyu [weWigan mu2013]. Iwe unoziva kuti unofanira kuedza mukana wako, unoziva iwe uchafanira kunge uripo kusvikira 10 maminitsi ekupedzisira kana chero chii, asi chero nguva patinowana mukana, tinongoda kuverenga uye isu inofanira kuita kuti tive makiriniki.
Kana zvisina kudaro, zuva racho ringagona kureba.
Nyaya iyi yakatanga kutanga (muChirungu) http://espn.com/soccer/english-fa-cup/0/blog/post/3855413/troy-deeneys-long-journey-from-prison-to-the-fa-cup-final-with-watford
Nheyo PSG - PSG: Dhigirii inoratidza kuParis semurongwa wakanaka kwazvo B mu mercato - FOOT 01
Weah anoda kujoina Neymar naMbappe muboka re PSG
Kuurayiwa kwecheche mu Muyuka: Ayah Paul Abine anobuda mumakumbo ake
Cameroon-mari: VaKameronia vashandi vanotya nekutadza kwemari yekunze
Royal PLOT: Trump & # 039; kuronga & # 039; BOMBSHELL anosangana naKate, William nemwanasikana Ivanka
India: Tarisira Amethi nerudo, anodaro Rahul Gandhi kuna Smriti Irani | India News
Rega uedzwe ne 23 May 2019 - VIDEO
VANHU & VANHU3,847